WOWOW Bronze Centerset Bridge Bridge Kitchen Faucet 4 Hole with Sprayer Side -
Bogga ugu weyn / Qubeyska jikada / Buundada Rustic Bridge Jikada / WOWOW Bronze Centerset Bridge Bridge Kitchen Faucet 4 God leh Side Sprayer
WOWOW Bronze Centerset Bridge Bridge Kitchen Faucet 4 Hole oo leh Buufiye Side
[Laba Qaboojiye Qasabada Biyaha】 Biriijka jikada buundada wuxuu ka kooban yahay naqshad 2-gacan ah wuxuuna la socdaa tuubooyin sahay ah (qabow & kulul), kaas oo gacan ka geysan kara xakameynta mugga biyaha iyo heerkulka si sax ah. Qaanso dheer oo heer sare ah oo 360 ° ah ayaa sidoo kale ku habboon labada weel.
[Dhisida naxaas adagFa Buundada buundada oo aad u culus waxay ka samaysan tahay naxaas adag oo culeyskeedu yahay 7.76 Ibs. Qasabadda weelka naxaasta leh oo leh dhammaystirka Naxaas Brown waa miridhku, daxalka, u adkaysiga daadinta, wuxuuna hubiyaa badbaadada biyaha iyo cimri dheer.
[Buufiye Dhinaceedka Faashadda leh Tuubada La Jiido】 Hal riix oo badhan ah, buufiyaha dhinaca naxaasta cadaadiska sareyso ku buufin kara durdur biyo xoog leh si loo nadiifiyo suxuunta iyo wasakhda geeska. Tuubada lagu daray waxaa loo soo jiidi karaa ilaa 59 inji, taas oo ay fududahay in la nadiifiyo meel kasta oo hareeraha saxanka ah.
[Rakibaadda EasyQasnadda qasabadda jikada ee qadiimiga ah waa qurxin qurux badan jikadaada. Qasabadda jikada guridda waxay la timaaddaa dhammaan qalabka lagama maarmaanka u ah iyo tilmaamaha isticmaalaha, taas oo ka dhigaysa rakibidda mid sahlan oo laga jarayo 30.
[Adeegga macaamiishaKitchen Jikada buundada 8 inji waxay ku raaxaysanaysaa 90 maalmood oo soo noqosho xaddidan leh iyo dammaanad 5 sano ah. Haddii ay jiraan wax su'aal ah oo ku saabsan qasabadda biriijka naxaasta ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir, waxaan aad ugu farxi lahayn inaan soo bandhigno xal
Haddii aad dooneysid madbakh Victoria u waxyoonay ama meel firfircoon oo 1950s-mawduuc leh, naqshadda buundada gadaal waa ikhtiyaar aad loo jecel yahay oo lagu dhisi karo jikada qaabka guridda ama musqusha.
style: Style A-leh dhinac buufiye
Color: Naxaas Brown
Dhererka Cabbirka: 6.3 inji
Gaaritaanka Gaarka ah: 7 inji
feature: 2 Gacan, 8-inji qasabadda
Godadka loo baahan yahay: 2
Buufiye Dhinaceed faashad leh tubbo jiid ah
Iyada oo la riixayo badhanka, buufiyeha dhinaca naxaasta ee cadaadiska sarreeya ayaa ku buufin kara durdur xoog leh oo biyo ah si uu u nadiifiyo suxuunta iyo wasakhda geeska. Tuubada soo bixitaanka ee lagu daray waa ilaa 59 inji, way fududahay in la nadiifiyo meel kasta oo ku wareegsan saxanka.
Qalabka sare ee 'Arc Spout' oo leh ABS Aerator
Hawada waxqabadka sare waxay bixisaa qulqulka socodka waxayna badbaadisaa 50% biyo.
Ma jiro biyo adag iyo miisaan.
Hawada waa la kala saari karaa, taas oo ay fududahay in la nadiifiyo ama la beddelo.
Taabashada jilicsan ee faraha leh si looga saaro miisaanka iyo kaalshiyamka.
360 ° Tuubada Wareegta leh 2 Gacan
2 lever qabta si fudud loogu xakameeyo heerkulka biyaha iyo mugga si sax ah.
Naqshad wareejin sare oo Arc 360 ° ah, oo ku habboon labada weel iyo lavabos.
8-inch guridda tubbada jikada Centerset Bridge waxay ku habboon tahay 2 dalool.
Qasab adag naxaas
Maaddada Naxa adag, fudeydka dayactirka, xasilloonida sare, nolosha oo aad u dheer.
Hubi caafimaadka iyo badbaadada dhibic kasta oo biyo ah
Looma baahna in laga walwalo miridhku, dhibaatooyinka daxalka.
Qasabadda Naxaasta Brown
Dhamaadka Bronze Brown ee aadka u fiican, muuqaalka guridda oo leh furaha hoose laakiin dhalaalaya.
Naqshadeyn qaas ah, ujeedo Victoria sare ah, labadaba mid qaab iyo waxqabad ah.
Codsiga: saxanka jikada / saxanka jikada / musqusha / huteelka
SKU: 23115A1A Categories: Qubeyska jikada, Buundada Rustic Bridge Jikada
Qulqulka Dheecaanka Dheecaanka ah ee WOWOW Dusha Karinta Kutubbada Chrome
La iibiyey: 44